Slot Curvy Magician ( Sexy Slot) - Myanmar Online Game
ပုံမှန် Symbol တွေ၊ Theme တွေနဲ့ Slot ကစားရတာပျင်းလာပြီလား? Slot လဲကစားရင် မျက်လှည့်လဲကြည့်ရင်း မျက်စိလဲအစာလေးကျွေးရင်း ကစားချင်လား? မျက်လှည့် Theme ကိုယူထားတဲ့ Slot ကစားနည်းတွေထဲမှာ ဒီတစ်ခုကတော့ JDB ရဲ့ အလှဆုံးဖန်တီးထားတဲ့ Symbol တွေရယ်၊ ငေးမောဖွယ်ရာကောင်းလောက်အောင် လှပတဲ့ Magician မလေးတွေရယ် နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားနည်းတစ်ခုလို့ပြောရမယ်ဗျ။ ဂိမ်းနာမည်ကတော့ Curvy Magician ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bonus ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ Player တွေအတွက်အခွင့်အရေးများတဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ Mode တွေပါဝင်ပါတယ်! Mode တွေထဲကမှ တစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင် Spin တစ်လှည့်ထဲမှာ ၃ခုပါဝင်လာတဲ့ Free Spin Symbol ၃ခုကြောင့်ရတဲ့ Free Spin Bonus ပါပဲ။ ဘောနပ် တွေအပြင် ကျလာတဲ့ Symbol ကိုလိုသလိုပြောင်းလဲပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Wild Symbol တွေကြောင့်လဲ ကစားသူကို အနိုင်ပွဲတွေတန်းစီ ရစေနိုင်မှာပါ!
ထုံးစံအတိုင်းပဲ Reel5ခုဖြစ်ပြီးတော့ ဘယ်မှညာဘက်ကို အနိုင်အတွက်ပါတယ်။(Free Spin Bonus Symbol မှအပ)Free Spin မစခင်မှာ ရိုးရိုး Symbol တွေရဲ့ တန်ဖိုးတွေကတော့ ပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီဂိမ်းရဲ့ Free Spin Bonus ကတော့ တခြား Slot တွေနဲ့မတူပဲ အနည်းဆုံး2ခုရှိတာနဲ့တင် Activate ဖြစ်ပါတယ်! ဘယ်ဘက်ဆုံးကနေ ညာဘက်ဆုံးမှာ အနည်းဆုံး Free Spin Symbol2ခုပါရုံနဲ့တင် Free Spin အခမဲ့ Spin 10 ခါလှည့်ခွင့်ရတဲ့အပြင် လောင်းကြေးကိုလဲ ဆတိုးပြီးပြန်ရသေးတယ်နော်။
Free Spin Bonus5ခုကျခဲ့မယ်ဆိုရင် Free Spin 50 ရရှိပြီး လောင်းကြေးနဲ့ Credit 50 မြှောက်ပြီး ပြန်ရပါတယ်
4 ခုကျခဲ့မယ်ဆိုရင် Free Spin 25 ရရှိပြီး လောင်းကြေးနဲ့ Credit 10 မြှောက်ပြီး ပြန်ရပါတယ်
3 ခုကျခဲ့မယ်ဆိုရင် Free Spin 15 ရရှိပြီး လောင်းကြေးနဲ့ Credit2မြှောက်ပြီး ပြန်ရပါတယ်
2 ခုကျခဲ့မယ်ဆိုရင် Free Spin 10 ရရှိပြီး လောင်းကြေးနဲ့ Credit 1 မြှောက်ပြီး ပြန်ရပါတယ်
ဖရီး Spin လှည့်နေချိန်မှာ နောက်ထပ် Free Spin Bonus ထပ်ကျနိုင်တာမို့ Free Spin အရေအတွက်တွေ ထပ်ပြီးပေါင်းတိုးနိုင်ပါသေးတယ် Wild Symbol ၂မျိုးတောင်ပါလာတာကိုလည်း သတိထားမိမယ်ထင်ပါတယ် ! Free Spin Bonus အတွက်လျော်ဆကိုတော့ Bonus မရခင်မှာ ထားထားတဲ့ လောင်းကြေးကိုပဲအတည်ယူပြီးတွက်တာပါ။
Re-Spin Bonus ဆိုတာကတော့ Free Spin လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာ Bonus Symbol တွေဟာ Reel 1 နဲ့5တို့မှာပေါ်လာနိုင်ပြီးတော့ ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ Reel 2,3 နဲ့4တို့ကို ထပ်ပေါင်းပြီး တစ်ကြိမ်ထပ်လှည့်ပေးပါတယ်အဲ့အချိန်မှာ Reel 2,3,4 တို့မှာပါ Bonus Symbol တွေကျလာမယ်ဆိုရင်တော့ Re-Spin bonus ကိုရသွားပါပြီ ။
ကဲ… ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားတွေက မျက်နှာသာမပေးဘူးလို့ ခံစားနေရတိုင်း Magician မ လေးရဲ့ Magic Touch လေးထိပြီး ကံတွေပွင့်သွားဖို့အတွက် ဘယ်ကိုလာရမလဲသိသွားပြီမဟုတ်လား။ Sexy ကျကျ Curvy Magician Slot ကိုကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ JDBYG Slot စာရင်းကို အခုပဲအပြေးလာလိုက်တော့နော်!